Mitsitsia hatramin'ny 97% amin'ity flyer mega ity ary maro hafa | Famoronana an-tserasera
Mitsitsia $ 1333 amin'ity tolotra manokana modely 250 sy fanesoana ho an'ny karatra fandraharahana, sidina ary maro hafa
Manuel Ramirez | | Templates, maro
Manana iray hafa isika tolotra manokana modely 250 sy fanesoana karatra fandraharahana, flyer ary betsaka kokoa izay ahafahanao mihary $ 1333. Kitapo mega mega mba hahafahanao manarona ny filan'ny mpanjifa mitaky.
Raha atao teny hafa, miresaka momba ny megapack iray izahay dia amin'ny vidiny $ 1362, fa ahoana kosa ity tolotra ity ho azonao eny an-tananao izany $ 29. Raha atotaly dia misy maodely 195 hanonta sy fanesoana 55 hahafahana milaza eny amin'ny mpanjifa mangataka famolavolana manokana.
1 Ny tena mampiavaka an'ity fonosana template 250 sy mockup ity
2 Kitapo 250 Mockups sy Template Flyer ary maro hafa: Tatitra isan-taona
3 Kitapo mackup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: karatra fandraharahana
4 Fonosana mockup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: lohan-tsoratry ny orinasa sy flyers
5 Kitapo 250 Mockups sy Template Flyer ary maro hafa: Card Mockups
6 Kitapo mackup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: litera
7 Fonosana mockup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: flyers hizara
Ny tena mampiavaka an'ity fonosana template 250 sy mockup ity
Ity megapack ity dia misy endrika 195 samihafa, miainga amin'ny flyer, karatra fandraharahana sy maro hafa. Manampy koa Fanesoana 55 azo namboarina tanteraka izay ahafahanao manova ny loko, ny fiaviana ary ny fametrahana ny singa sary rehetra. Amin'izany dia ho afaka hifanaraka tanteraka amin'ny fitakian'ny mpanjifa rehetra ianao ary hanome karazana serivisy hafa ho an'ireo izay manakana anao tsy hanao fampiasam-bola ara-toekarena.
Ireo no tena lehibes endri-javatra amin'ity fonosana maodely 250 ity ho an'ny fanontana:
195 fisie amin'ny PSD vonona ny ahitsy ho an'ny tanjona matihaninao.
Karatra fandraharahana 59.
Fivarotana orinasa 106.
Vonona ny hampiasaina amin'ny Adobe Photoshop Cs5 na ho avy.
Voalamina tsara amin'ny sosona sy vondrona loko.
Zavatra "marani-tsaina" mba hahitana ny sarinao mora sy tsotra.
Vonona ny hanao pirinty amin'ny endrika loko CMYK ary misy vahaolana 300 dpi.
Endritsoratra sy sary maimaimpoana no nampiasaina.
ny endri-javatra lehibe amin'ny mockups:
55 PSD fisie vonona hanitsy.
Fanesoana karatra orinasa 3 fonosana miaraka amina modely 15, flyer 3 fonosana misy maodely 28, fanesoana fitaovana 7, fanasana 5 ary fanesoana carte postales.
Azonao atao ny mampiasa Adobe Photoshop CS5 na kinova hafa.
tanteraka nalamina tamin'ny sosona sy kaody loko amin'ny vondrona.
Ny rakitra dia avo lenta ka hahatratra hatramin'ny 3.000 x 2.000 pika.
Azonao atao ny mampiasa zavatra "marani-tsaina" hametrahana mora foana ny volavolao amin'ny tsirairay amin'ireo fanesoana.
Araka ny azonao an-tsaina dia a fonosana sy karatra fandraharahana feno tanteraka mba hamaritana ny sokajy rehetra araka izay holazainay manaraka. Raha manana ampahany tsara amin'ny asa efa vita ianao dia tsy mila manamboatra ny fanesoana ho an'ny mpanjifa fotsiny ary hanome azy ireo azy ireo hahafahan'izy ireo mijery.
Kitapo 250 Mockups sy Template Flyer ary maro hafa: Tatitra isan-taona
Ny tatitra isan-taona dia mamela antsika hanana rakotra tonga lafatra amin'ny tatitra isan-taona an'ny orinasa miaraka amina kisary marobe hanondroana ny fahaizan'ny matihanina amin'ny orinasa iasanao.
Miorina amin'ny endriny ankehitriny miaraka amin'ny karazana karazany, na dia izany aza miolakolaka miolakolaka Tapaka ny fizarana ny ekipa iray manontolo. Ny tatitra isan-taona dia manana endrika maro isan-karazany ary mampiseho amintsika ny fomba fampiharana ny sarinay manokana ka hanome izany hevitra manokana izany momba ilay fonony.
Tokony holazaina fa tsy manana ny sariny izy, ka ity a ampahany amin'ny asa izay ho anjarantsika ento mivoaka. Tatitra isan-taona dia io fonosana tonga lafatra io amin'ny karazana asa rehetra misy ifandraisany amin'ny zavatra orinasa na orinasa. Azontsika atao ny manome azy tanjona hafa manokana amin'ny alàlan'ny fampiasana typografika sy sary samihafa, satria manana karazany maro izy, izay manome lanja bebe kokoa an'ity fonosana modely sy fanesoana iray manontolo ity.
Kitapo mackup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: karatra fandraharahana
Saika azontsika lazaina izany ho an'ny karatra fandraharahana Izy ireo dia mifandray akaiky amin'ny Tatitra isan-taona ary izy ireo dia mikendry an'io mpanjifa mitaky fitadiavana karatra fampisehoana tsara indrindra io hatramin'ny fotoana nifanomehezan-tanana azy ireo.
Un famolavolana madio miaraka amin'ny loko lehibe mena ary andiana tsipika, ary koa endrika geometrika, izay mahay manavaka ny angon-drakitra manan-danja indrindra toa ny mailaka, ny toerana, ny anaran'ilay solontena ary koa ny logo an'ny orinasa.
Karatra fandraharahana avo lenta ary misy fiatraikany lehibe amin'ny sary. Ankoatry ny mena dia misy ihany koa ny loko hafa toy ny mainty ary koa ny endrika manintona izay mahatsapa ho miala sasatra amin'ireo mpanjifa mety mila serivisy an'ny orinasanay.
Ny maodelin'ny karatra fandraharahana sy ny mockup dia mametraka antsika mialoha a repertoire tsara miaraka amina karazana endriny rehetra, na dia, araka ny efa nolazainay aza, dia mahita tsipika mitongilana na miolakolaka misimisy kokoa izay manetsika ny karatry ny asa aman-draharaha miaraka amina endrika fitodihana. Toy izany koa ny loko amin'ireo mavokely, voasary, manga na volondavenona izay ampahany lehibe amin'ny karatra manaitra indrindra.
Karatra fandraharahana 59 izay mbola mampiseho ny kalitaon'ny zavatra rehetra ny fonosana mega sy modely ho an'ny flyers ary ireo lohateny izay matetika tadiavintsika amin'ny fotoana mety indrindra.
Fonosana mockup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: lohan-tsoratry ny orinasa sy flyers
Ity dia iray amin'ireo filokana lehibe amin'ity fonosana ity amin'ny alàlan'ny a isan'ny lohan-dohan'ny orinasa sy flyer. Misy totalin'ny 109 hampifaly anay amin'izany famolavolana orinasa nomena ny tsipika sy ny loko izay mifanaraka tsara amin'ny tsirairay mba hanavahana tsara ny atiny.
Manohy ny fahatsapana ny tsoroka sy ny endrika mahitsy ihany ho an'ny sasantsasany amin'ny lohateny mba hanomezana ny fonosana iray karazana maro karazana. Sary tsy tafiditra, saingy tsy io no antony lehibe ahazoana ity fonosana ity, satria ny mahaliana antsika dia ny maodely ahafahantsika manamboatra azy ireo araka izay tadiavinay.
Vahaolana iray hafa anananay dia ny fampifangaroana ireo maodely sasany raha hitantsika fa misy singa sary azo ampiasaina amin'ny hafa. Matetika izy ireo dia manana loko iraisana, toy ny mena voalohany na manga, ka hisintona fotsiny ao amin'ny Adobe Photoshop izy io mba hampitana azy amin'ny toerana iray mankany amin'ny toerana hafa.
Ny karazan-doha isan-karazany dia miainga amin'ny orinasa miaraka amin'ireo andalana sy typografia fampiasa amin'ny style, ka inona no mety ho flyer pejy feno ahafahantsika manambara fety amin'ny volafotsy amin'ireo loko manga sy an-dranomasina ireo, ary koa fety amin'ny faran'ny taona miaraka amin'ny loko mavokely mety. Misy ihany koa ho an'ny antoko kanto sy kanto, indrindra amin'ny endritsoratra voafantina amin'ny lokony.
Ity fonosana ity dia misy endrika tsotra kokoa ihany koa miaraka amina endrika minimalist izay hita eo an-tampon'ny sy eo ambanin'ny modely. Ny zavatra tsara indrindra dia ny hijerenao mba hanomezanao lanja bebe kokoa ny fonosana iray miaraka aminy tolotra tsy azo ivalozana 97%; toy ity iray ity hatramin'ny andro lasa izay.
Kitapo 250 Mockups sy Template Flyer ary maro hafa: Card Mockups
Ny teboka iray hafa manandanja amin'ity fonosana flyers ity sy ny maro hafa dia ny fanesoana ireo karatra fandraharahana. Fifantohana amin'ny iray izay manjaka mainty sy mavo, indrindra hanome endrika ny karatra fandraharahana misy fanatrehany manan-danja. Tsotra be izy io amin'ny foto-keviny, satria ny loko mainty dia ao aorina, raha ny eo aloha kosa mampiasa ny loko mavo sy typografika kanto hanehoana ny solontenany.
Ny sisa amin'ny endritsoratra dia amin'ny mainty mba hanomezana zorony voaravaka amin'ny fomba minimalista, saingy miaraka amina famaranana lehibe. Ity fanesoana ity dia hamela anao hilalao loko isan-karazany ihany koa mba hanomezana azy ho azafady; toy ny hoe tonga amintsika ny mampiasa kaody QR toy ny sary famantarana ary avelao ny client hanadihady izany amin'ny findainy. Iray amin'ireo endrika marketing tany am-boalohany natolotry ity fonosana mockup sy modely 250 ho an'ny karatry ny fandraharahana ity.
Kitapo mackup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: litera
Mamela toerana kely koa izahay ho an'ny taratasy fitsingerenan'ny andro nahaterahana mijoro irery toy ny entana tany am-boalohany. Miaraka amin'ny mavokely toy ny lokon'ny typeface sy valopy tsara natao tamin'ny famolavolana miaraka amin'ny loko mavokely indray ary loko mavo mamirapiratra. Ity fonosana ity dia misy ireto karazana extra ireto izay mametraka ny ranomandry amin'ny mofomamy.
Fonosana mockup 250 sy maodelin'ny flyer ary maro hafa: flyers hizara
Indraindray tsy maintsy misintona ireo fomba ianao nentim-paharazana kokoa toy ireo flyers habe A4 ireo. Tsy ho anay ny hizara azy ireo manodidina ny faritra efa tranainy iray, izay mety ho azo atao ihany koa, fa ny hamela azy ireo eo amin'ny latabatra fivarotana izay ahafahantsika milaza mazava ny fikasan'ny orinasanay na ny serivisy omen'ny mpanjifa manokana.
Ity fonosana ity koa dia manana karazany maro karazana satria telo ambin'ny folo izy ireo. Ny famolavolana ny mockup flyer dia manaraka ny lalàna apetraka mandritra ny fonosana mba tsy hanadino ireo pitsopitsony rehetra.
Raha fintinina, a mega pack of mockups sy modely ho an'ny flyer, karatra fandraharahana ary maro hafa izany, ho an'ny vidiny azonao ahazoana azy, izany hoe, manodidina ny $ 29, izany dia fotoana bebe kokoa noho ny fanararaotana manitatra ny katalaogin'ny tolo-kevitry ny masoivohonao na ny asanao amin'ny maha-mpiasa tsy miankina.
Aza misalasala ary vidio ny template 250 rehetra alohan'ny hifaranan'ny varotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Templates » Mitsitsia $ 1333 amin'ity tolotra manokana modely 250 sy fanesoana ho an'ny karatra fandraharahana, sidina ary maro hafa
Fitaovana famokarana ho an'ny mpamorona
Ahoana ny fomba fanaovana multitabes nefa tsy variana toy ny pro